၂၀၁၈ အတွက် IMDb ကရွေးချယ်ထားတဲ့ အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ကား (၅) ကား - For her Myanmar
နိုဝင်ဘာလအထိ သုံးသပ်ချက်အရတော့ ဒီရုပ်ရှင်တွေက IMDb rating အများဆုံးပါပဲ။
ဟိဟိ။ ဒီဇင်ဘာရောက်ပြီနော့်… ဒီလရောက်ရင် လူက ဘာလို့လဲမသိ အလိုလိုနေရင်းကို ပျော်နေတာ။ ပိတ်ရက်တွေလည်းများတယ်ဆိုတော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ချိန်တွေလည်း ရှိမှာပဲလေ။ အာ့နဲ့ အက်မင်နှင်းနှင်းတစ်ယောက် ယောင်းတို့ ရုပ်ရှင်ကောင်းကောင်းလေးတွေ ကြည့်လို့ရအောင် ရှာဖွေပြီး တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်…
(၁) Avengers : Infinity War
ဒီဇာတ်ကားကို ညွှန်းပေးတယ်ဆိုတာ အကြံနဲ့ပါနော်။ ဒီဟာကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဆိုရင် တောက်လျှောက်လွန်လေခဲ့ပြီးသော Avengers ရုပ်ရှင်တွေပြန်ကြည့်ရပါမယ်။ (အယ်လဲ့ အကြံသိပ်ကြီးသွားလားယောင်းတို့ :P) အလကားစတာပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ယောင်းတို့ရယ်..ဂြိုဟ်တစ်ဂြိုဟ်မှာ လူဦးရေ အရမ်းများလာရင် အဲဒီဂြိုဟ်မှာရှိတဲ့ သယံဇာတတွေနဲ့ မလုံလောက်တော့ဘဲ ကပ်ဆိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဒါကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ဂြိုဟ်တိုင်း ဂြိုဟ်တိုင်းရဲ့ လူဦးရေကို တစ်ဝက်စီလျှော့ချတာပဲလို့ Mad Titan (Thanos) က ယုံကြည်ပါတယ်။ တစ်ဂြိုဟ်ချင်းစီကို သိမ်း၊ လူဦးရေ တစ်ဝက်လျှော့ ဆိုတာထက် စကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ လူဦးရေ တစ်ဝက်လျှော့လိုက်တာက ပိုအဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လား.. ဒီတော့ ဒီပလန်အတိုင်းဖြစ်လာဖို့ infinity gems လို့ခေါ်တဲ့ အနန္တကျောက်တုံးတွေကို Thanos က လိုက်ရှာရာက စစ်ပွဲကြီး စတင်ပါတော့တယ်။ ဒီစစ်ပွဲထဲမှာ ဘယ်သူတွေကိုဆုံးရှုံးရမှာလဲ? စကြဝဠာကြီးကိုရော ကာကွယ်နိုင်ကြပါ့မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ ကြာချိန်ကတော့ ၂ :၄၉ မိနစ် ကြာမြင့်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ IMDb rating 8.5 ရထားပြီး အားလုံးထဲမှာ အမြင့်ဆုံးပါပဲ။
(၂) Bohemian Rhapsody
Queen အဖွဲ့ကို ချစ်တဲ့လူတွေ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေး တစ်ခုပါပဲ။ Queen ဆိုပြီး ကမ္ဘာကသိမလာခင် ဘယ်လိုအခြေအနေတွေကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ဒီလိုတစ်နေရာရောက်အောင် ယူခဲ့တာလဲ? AiD ရှိုးပွဲမှာ ဘာကြောင့်အောင်မြင်သွားတာလဲ စတဲ့ Queen အဖွဲ့ရဲ့အောင်မြင်မှု မှတ်တိုင်၊ အတက်အကျအားလုံးကို ရုပ်ရှင်ကားအနေနဲ့ ပုံဖော်ထားတာပါ။ ရုပ်ရှင်ကြာချိန်ကတော့ ၂ နာရီ ၁၄ မိနစ်ပါ။ IMDb rating 8 အထိရရှိထားပါတယ်။
Related Article >>> လက်တွေ့ဆန်လွန်းတဲ့ ရိုမန့်စ် ရုပ်ရှင်ကား (၃)ကား
(၃) A star is born
ဘဝမှာ ပိုက်ဆံနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ဘယ်လောက်ရှိရှိ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာ မရှိရင်ဘဝက လစ်လပ်နေတတ်တယ်ဆိုတာ Jack ကသက်သေပါပဲ။ စွဲလမ်းမက်မောစရာဆိုလို့ သူတီးလိုက်တိုင်း သံစဉ်တွေထွက်လာတဲ့ ဂီတာတစ်လက်ကလွဲပြီး မရှိခဲ့တဲ့ဘဝကို Ally ဆိုတဲ့ ဘားမှာသီချင်းဆိုတဲ့ မိန်းကလေးက ဝင်လာပါတယ်။ အရည်အချင်းရှိပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိလို့ ပွဲမထွက်ရဲတဲ့ ဒီကောင်မလေးကို စွဲစွဲလမ်းလမ်းချစ်မိသွားပြီး ပွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ သူ(မ)ရဲ့ အောင်မြင်မှုကလည်း အတိုင်းမသိဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ခရီးလမ်းက ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲ? ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ Bradley Cooper နဲ့ Lady Gaga တို့ကလည်း အတွဲညီညီ သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ဇာတ်ဝင်သီချင်းတွေကလည်း အရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတာမို့ အချစ်ဒရမ်မာကား ကောင်းကောင်းလေးတွေ ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ ယောင်းယောင်းတွေ အထူးနှစ်ခြိုက်ကြမှာပါ။ IMDb rating 8.2 ရရှိထားပြီး ၂ နာရီနဲ့ ၁၆ မိနစ် ကြာမြင့်ပါတယ်။
(၄) Creed 2
ကမ္ဘာကျော် လက်ဝှေ့သမားဖြစ်လာတဲ့ Adonis Johnson က သူ့ရဲ့ချစ်သူကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းပြီး ဘဝအသစ်တစ်ခုကိုပဲ တည်ထောင်ရင်း Los Angeles မှာပဲ အေးအေးဆေးဆေးနေတော့မယ်လို့ စိတ်ကူးပေမဲ့ ရှင်းစရာ ရန်ကြွေးက ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ သူမဝင်ချင်တဲ့ ကြိုးဝိုင်းထဲကို သူကိုယ်တိုင်ပြန်ဝင်ဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ရပါတယ်။ လက်ဝှေ့ထိုးတာကို ခွင့်မပြုချင်တော့တဲ့ သူ့လက်တွဲဖော်ကရော သူ့အနား ဆက်ရှိနေဦးမှာလား? ဒီသွေးကြွေးဆပ်တဲ့ အချိန်မှာရော အနိုင်နဲ့ ပိုင်းနိုင်ဦးမှာလား ဆိုတာကိုတော့ ပိတ်ကားပေါ် ဆက်ရှုပေါ့… ရုပ်ရှင်ကြာမြင့်ချိန်က ၂ နာရီ ၁၀ မိနစ်ဖြစ်ပြီး IMDb rating 8 ရရှိထားပါတယ်။
Related Article >>> အစားတစ်လိုင်း ယောင်းတို့အတွက် သွားရည်ကျစရာ ရုပ်ရှင်ကားကောင်း (၂)ကား
(၅) Incredibles 2
၁၄ နှစ်ကြာ ပရိသတ်နဲ့ ကင်းကွာနေခဲ့တဲ့ Mr.Incredible တို့တွေ ၂၀၁၈ မှာတော့ ပြန်လာခဲ့ပါပြီ။ ဘဏ်ဖောက်ထွင်းမှုကို မကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့နောက် စူပါဟီးရိုးတွေအပေါ် ပြည်သူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုက နည်းပါးလာပြီးတဲ့နောက် စူပါဟီးရိုးတွေက သူတို့ရဲ့ ပုံစံအမှန်ကိုဖျောက်ပြီး တိတ်တဆိတ်ပဲ နေခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ စူပါဟီးရိုးတွေကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ပြည်သူရှေ့ကို ပြန်ရောက်နိုင်အောင် ထုတ်ပေးမယ့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကြောင့် ဟယ်လန်က သူ(မ)ရဲ့ အမည်အရင်း Elestic Girl နဲ့ပဲ စူပါစတန့်အစီအစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း မသင်္ကာစရာ အဖြစ်အပျက်တွေက ဆက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့…
စူပါဟီးရိုးအဖွဲ့အစည်းကြီးက ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်သွားမှာလဲ??? ပြီးတော့ အငယ်ဆုံးကလေးလေး ဂျက်ဂျက်မှာလည်း ပါဝါပေါင်းစုံရှိနေရှိနေတာမို့ သူကရော မစ်ရှင်တွေမှာ ပါဝင်လာတဲ့ စူပါဟီးရိုးလေး ဖြစ်လာမှာလား… ရုပ်ရှင်ရဲ့ကြာချိန်ကတော့ ၂ နာရီပါ။ IMDb rating ကတော့ 7.9 ရရှိထားပါတယ်။
ယောင်းတို့ရော… အားလုံးထဲမှာ ဘယ်ရုပ်ရှင်ကားကို အကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတာ ပြောသွားပေးခဲ့ဦးနော်
References : imdb, esquire
နိုဝငျဘာလအထိ သုံးသပျခကျြအရတော့ ဒီရုပျရှငျတှကေ IMDb rating အမြားဆုံးပါပဲ။
ဟိဟိ။ ဒီဇငျဘာရောကျပွီနေျာ့… ဒီလရောကျရငျ လူက ဘာလို့လဲမသိ အလိုလိုနရေငျးကို ပြျောနတော။ ပိတျရကျတှလေညျးမြားတယျဆိုတော့ ရုပျရှငျကွညျ့ခြိနျတှလေညျး ရှိမှာပဲလေ။ အာ့နဲ့ အကျမငျနှငျးနှငျးတဈယောကျ ယောငျးတို့ ရုပျရှငျကောငျးကောငျးလေးတှေ ကွညျ့လို့ရအောငျ ရှာဖှပွေီး တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ…
ဒီဇာတျကားကို ညှနျးပေးတယျဆိုတာ အကွံနဲ့ပါနျော။ ဒီဟာကိုနားလညျဖို့အတှကျဆိုရငျ တောကျလြှောကျလှနျလခေဲ့ပွီးသော Avengers ရုပျရှငျတှပွေနျကွညျ့ရပါမယျ။ (အယျလဲ့ အကွံသိပျကွီးသှားလားယောငျးတို့ :P) အလကားစတာပါ။ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ယောငျးတို့ရယျ..ဂွိုဟျတဈဂွိုဟျမှာ လူဦးရေ အရမျးမြားလာရငျ အဲဒီဂွိုဟျမှာရှိတဲ့ သယံဇာတတှနေဲ့ မလုံလောကျတော့ဘဲ ကပျဆိုးတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ ဒါကို ဖွရှေငျးဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးကတော့ ဂွိုဟျတိုငျး ဂွိုဟျတိုငျးရဲ့ လူဦးရကေို တဈဝကျစီလြှော့ခတြာပဲလို့ Mad Titan (Thanos) က ယုံကွညျပါတယျ။ တဈဂွိုဟျခငျြးစီကို သိမျး၊ လူဦးရေ တဈဝကျလြှော့ ဆိုတာထကျ စကွဝဠာကွီးတဈခုလုံးရဲ့ လူဦးရေ တဈဝကျလြှော့လိုကျတာက ပိုအဆငျပွတေယျမဟုတျလား.. ဒီတော့ ဒီပလနျအတိုငျးဖွဈလာဖို့ infinity gems လို့ချေါတဲ့ အနန်တကြောကျတုံးတှကေို Thanos က လိုကျရှာရာက စဈပှဲကွီး စတငျပါတော့တယျ။ ဒီစဈပှဲထဲမှာ ဘယျသူတှကေိုဆုံးရှုံးရမှာလဲ? စကွဝဠာကွီးကိုရော ကာကှယျနိုငျကွပါ့မလားဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါပဲ။ ကွာခြိနျကတော့ ၂ :၄၉ မိနဈ ကွာမွငျ့ပါတယျ။ ဒီဇာတျကားလေးကတော့ IMDb rating 8.5 ရထားပွီး အားလုံးထဲမှာ အမွငျ့ဆုံးပါပဲ။
Queen အဖှဲ့ကို ခဈြတဲ့လူတှေ လကျမလှတျသငျ့တဲ့ ဇာတျကားကောငျးလေး တဈခုပါပဲ။ Queen ဆိုပွီး ကမ်ဘာကသိမလာခငျ ဘယျလိုအခွအေနတှေကေို ဖွတျသနျးခဲ့ပွီး ဒီလိုတဈနရောရောကျအောငျ ယူခဲ့တာလဲ? AiD ရှိုးပှဲမှာ ဘာကွောငျ့အောငျမွငျသှားတာလဲ စတဲ့ Queen အဖှဲ့ရဲ့အောငျမွငျမှု မှတျတိုငျ၊ အတကျအကအြားလုံးကို ရုပျရှငျကားအနနေဲ့ ပုံဖျောထားတာပါ။ ရုပျရှငျကွာခြိနျကတော့ ၂ နာရီ ၁၄ မိနဈပါ။ IMDb rating 8 အထိရရှိထားပါတယျ။
Related Article >>> လကျတှဆေ့နျလှနျးတဲ့ ရိုမနျ့ဈ ရုပျရှငျကား (၃)ကား
ဘဝမှာ ပိုကျဆံနဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ ဘယျလောကျရှိရှိ ခဈြခွငျးမတ်ေတာဆိုတာ မရှိရငျဘဝက လဈလပျနတေတျတယျဆိုတာ Jack ကသကျသပေါပဲ။ စှဲလမျးမကျမောစရာဆိုလို့ သူတီးလိုကျတိုငျး သံစဉျတှထှေကျလာတဲ့ ဂီတာတဈလကျကလှဲပွီး မရှိခဲ့တဲ့ဘဝကို Ally ဆိုတဲ့ ဘားမှာသီခငျြးဆိုတဲ့ မိနျးကလေးက ဝငျလာပါတယျ။ အရညျအခငျြးရှိပမေဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုမရှိလို့ ပှဲမထှကျရဲတဲ့ ဒီကောငျမလေးကို စှဲစှဲလမျးလမျးခဈြမိသှားပွီး ပှဲထုတျလိုကျတဲ့အခါမှာ သူ(မ)ရဲ့ အောငျမွငျမှုကလညျး အတိုငျးမသိဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီနောကျမှာတော့ သူတို့နှဈယောကျရဲ့ အခဈြခရီးလမျးက ဘယျလိုတှဆေကျဖွဈမှာလဲ? ဒီဇာတျကားထဲမှာ အဓိကသရုပျဆောငျတှဖွေဈတဲ့ Bradley Cooper နဲ့ Lady Gaga တို့ကလညျး အတှဲညီညီ သရုပျဆောငျထားပွီး ဇာတျဝငျသီခငျြးတှကေလညျး အရမျးဆှဲဆောငျမှုရှိတာမို့ အခဈြဒရမျမာကား ကောငျးကောငျးလေးတှေ ကွိုကျနှဈသကျကွတဲ့ ယောငျးယောငျးတှေ အထူးနှဈခွိုကျကွမှာပါ။ IMDb rating 8.2 ရရှိထားပွီး ၂ နာရီနဲ့ ၁၆ မိနဈ ကွာမွငျ့ပါတယျ။
ကမ်ဘာကြျော လကျဝှသေ့မားဖွဈလာတဲ့ Adonis Johnson က သူ့ရဲ့ခဈြသူကို လကျထပျခှငျ့တောငျးပွီး ဘဝအသဈတဈခုကိုပဲ တညျထောငျရငျး Los Angeles မှာပဲ အေးအေးဆေးဆေးနတေော့မယျလို့ စိတျကူးပမေဲ့ ရှငျးစရာ ရနျကွှေးက ပျေါလာတဲ့အခါမှာ သူမဝငျခငျြတဲ့ ကွိုးဝိုငျးထဲကို သူကိုယျတိုငျပွနျဝငျဖို့ ရှေးခယျြခဲ့ရပါတယျ။ လကျဝှထေို့းတာကို ခှငျ့မပွုခငျြတော့တဲ့ သူ့လကျတှဲဖျောကရော သူ့အနား ဆကျရှိနဦေးမှာလား? ဒီသှေးကွှေးဆပျတဲ့ အခြိနျမှာရော အနိုငျနဲ့ ပိုငျးနိုငျဦးမှာလား ဆိုတာကိုတော့ ပိတျကားပျေါ ဆကျရှုပေါ့… ရုပျရှငျကွာမွငျ့ခြိနျက ၂ နာရီ ၁၀ မိနဈဖွဈပွီး IMDb rating 8 ရရှိထားပါတယျ။
Related Article >>> အစားတဈလိုငျး ယောငျးတို့အတှကျ သှားရညျကစြရာ ရုပျရှငျကားကောငျး (၂)ကား
၁၄ နှဈကွာ ပရိသတျနဲ့ ကငျးကှာနခေဲ့တဲ့ Mr.Incredible တို့တှေ ၂၀၁၈ မှာတော့ ပွနျလာခဲ့ပါပွီ။ ဘဏျဖောကျထှငျးမှုကို မကာကှယျပေးနိုငျခဲ့တဲ့နောကျ စူပါဟီးရိုးတှအေပျေါ ပွညျသူတှရေဲ့ ယုံကွညျမှုက နညျးပါးလာပွီးတဲ့နောကျ စူပါဟီးရိုးတှကေ သူတို့ရဲ့ ပုံစံအမှနျကိုဖြောကျပွီး တိတျတဆိတျပဲ နခေဲ့ရပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ စူပါဟီးရိုးတှကေို ထောကျပံ့ပေးပွီး ပွညျသူရှကေို့ ပွနျရောကျနိုငျအောငျ ထုတျပေးမယျ့ အဖှဲ့အစညျးတဈခုကွောငျ့ ဟယျလနျက သူ(မ)ရဲ့ အမညျအရငျး Elestic Girl နဲ့ပဲ စူပါစတနျ့အစီအစဉျမှာပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး မသင်ျကာစရာ အဖွဈအပကျြတှကေ ဆကျတိုကျဖွဈလာတဲ့အခါမှာတော့…
စူပါဟီးရိုးအဖှဲ့အစညျးကွီးက ဘယျလိုတှဆေကျဖွဈသှားမှာလဲ??? ပွီးတော့ အငယျဆုံးကလေးလေး ဂကျြဂကျြမှာလညျး ပါဝါပေါငျးစုံရှိနရှေိနတောမို့ သူကရော မဈရှငျတှမှော ပါဝငျလာတဲ့ စူပါဟီးရိုးလေး ဖွဈလာမှာလား… ရုပျရှငျရဲ့ကွာခြိနျကတော့ ၂ နာရီပါ။ IMDb rating ကတော့ 7.9 ရရှိထားပါတယျ။
ယောငျးတို့ရော… အားလုံးထဲမှာ ဘယျရုပျရှငျကားကို အကွိုကျဆုံးလဲဆိုတာ ပွောသှားပေးခဲ့ဦးနျော
Tags: 2018, high, IMDb, Movie, Movies, review, TOP
ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင်... (အပိုင်း -၁ )
အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ လွယ်ကူမြန်ဆန်စေမယ့် ကွန်ပျူတာကီးဘုတ် shortcut key များ
Hnin Ei Oo December 4, 2018